Ny sasany iPhone 11 dia mahazo efijery maintso noho ny lesoka hafahafa | Vaovao IPhone
Ny sasany iPhone 11 dia mahazo efijery maintso noho ny lesoka hafahafa
Tony Cortes | | iPhone 11
Ny mpampiasa sasany dia mieritreritra fa satria efa ho an'arivony euro no laniana amin'ny finday dia tsy ho diso izy ary tsy hahomby mihitsy. Fahadisoana lehibe. Mazava ho azy, ny kalitaon'ny fitaovana na amin'ny hardware na rindrambaiko dia avo kokoa raha ampitahaintsika amin'ny hafa ambany vidiny, fa tsy milina lavorary izy io, ary indraindray afaka manome aretin'andoha antsika io.
Izany no mitranga amin'ireo mpampiasa iPhone 11. Misy antony tsy fantatra maka loko maitso ny efijery. Tsy manakana ny fahazoana mampiasa ny iPhone ara-dalàna, fa mazava ho azy fa lesoka izay tsy maintsy ahitsy amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa.
Azontsika antsoina hoe «ny vokany hulk«. Ilay maherifo Marvel, rehefa tezitra, dia miova avy amin'ny olon-tsotra mankany amin'ny monster green muscular. Eny, zavatra mitovy amin'izany no mitranga amin'ny iPhones sasany amin'izao fotoana izao.
Ny fitarainana avy amin'ny mpampiasa sasany an'ny iPhones 2019 dia miseho amin'ny sehatra Internet maro karazana (iPhone 11, iPhone 11Pro ary iPhone 11 Pro Max). Nohazavain'izy ireo fa indraindray rehefa manokatra ny fitaovany izy ireo dia maka loko maitso ny efijery iPhone. Matetika mitranga izany rehefa mamoha ny terminal na rehefa mandeha maody maizina. Ary tsy foana, fa kisendrasendra. Ary indraindray dia mety ho tsara tarehy ary indraindray maintso. Olona manjavozavo, avia.
Tsy fantatra na olana momba ny fitaovana na «bug» ao amin'ny iOS 13.5
Azontsika atao ny miantso ny lesoka "Hulk Effect" noho ny antony roa: noho ny feo maitso raisin'ny efijery, ary noho ny hatezerana raisin'ny mpampiasa mijaly amin'izany.
Raha vao jerena (sy nokasaina natao) dia mety ho toa olana momba ny fitaovana, tontonana na fampisehoana mpamily. Saingy ireo izay mijaly noho ny lesoka dia manazava fa mitranga izany hatramin'ny nanavaozan'izy ireo ny iOS 13.5 ny terminal misy azy ireo, ka "bug" ao amin'ny rafitra fiasa no tsapa. Ity no ho tsara indrindra amin'ny rehetra, satria Apple dia manamboatra azy amin'ny alàlan'ny iOS vaovao.
Raha fitaovana ny olana dia ho sarotra ny raharaha. Apple dia hanamboatra azy ihany, fa tsy maintsy mandalo fanamboarana maimaimpoana ianao. Manantena aho fa tsia. Vao tsy ela akory izay no nahitana azy, ary amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy valiny avy amin'i Apple. Azo antoka fa any Cupertino mihoatra ny iray no lany tamin'ny faran'ny herinandro niasa tamin'ny olana. Tsy maintsy miandry isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 11 » Ny sasany iPhone 11 dia mahazo efijery maintso noho ny lesoka hafahafa
Jaime dia hoy izy:
Mitranga amiko miaraka amin'ny iPhone 11 pro amin'ny maody maizimaizina, rehefa manokatra ny efijery dia mivadika maitso mandritra ny 5 segondra ary avy eo manamboatra ny mahazatra. Manelingelina. Manantena aho fa amboarin'izy ireo izao.
Mamaly an'i Jaime
Tony Cortes dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao, aza manao na inona na inona ary miandry hahita izay lazain'i Apple ...
Valiny tamin'i Toni Cortés
Ny detection Apple Watch fall dia mamonjy aina indray
Ahoana ny fomba hampiasana ny maody maizina ao amin'ny Gmail fa efa azon'ny mpampiasa rehetra izao